မန္တလေးမြို့က PDF တွေကို သွားရောက်ကူတိုက်ပေးသည့် ကျောက်ဆည်ခရိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့(K.D.D.F)မှ အဖွဲ့ဝင်များဖမ်းဆီးခံရပြီး အဆက်အသွယ်ပြတ်နေကြောင်း ထုတ်ပြန် – Shwe Nay Chi
ဒီကနေ့ဇွန်လ(၂၂)ရက်နေ့မှာ မန္တလေးမြို့မှာ မြို့ခံ PDF လူ ငယ်တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တို့ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ကာ တိုက် ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီး တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းတွေ အထိအခိုက်န ည်းစေဖို့အတွက် နိုင်ငံတဝှမ်းပြည်သူတွေက စိတ်ပူစွာနဲ့အား ပေးဆုတောင်းနေခဲ့ကြရပါတယ်..။
မန္တလေးမြို့ နေရာအနှံ့အပြား ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ် ပွားခဲ့ပြီး PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူ ပြည်သူတွေကလည်း ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပြီး မန္တလေးအတွက် ရန်ကုန်အပါအဝင် အခြားဒေ သကလည်း ထကြွပေးခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ အင်အားထပ်တိုးလာပြီး အင် အားမမျှတော့တဲ့အတွက် မန္တလေးPDFတွေ ကူညီီဖို့ ကျောက်ဆည်ခရိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့(K.D.D.F) များက ဝင်ရောက်ကူ ညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်..။
စစ်​ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်​နေတဲ့ မန္တလေးမြို့ PDF အား သွား​ရောက်အားဖြည့် ကူညီတိုက်ခိုက်​သည့် ကျောက်ဆည်ခရိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့(K.D.D.F)မှ (၂)ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီး (၃) ဦးက အဆက်အသွယ်ပြတ်​နေ​ကြောင်း K.D.D.F မှ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်..။
မန္တလေးအတွက် ကူညီတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်းရှိ မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ မိမိအိမ်အတွင်းသာနေပေးကြဖို့ကိုလည်း ကျောက်ဆည်ခရိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့(K.D. D.F) မှ မနက်ပိုင်းအချိန်က တိုက်တွန်းပြန်ကြားခဲ့ပါသေးတ ယ်..။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မန္တလေးမြို့မှာ အပစ်အခတ်တွေရပ်စဲသွားပေမယ့် မန္တလေးမြို့ အပါအဝင် ရန်ကုန်မြို့နဲ့အခြားမြို့တွေမှာလည်း နေရာတော်တော်များများမှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကြပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်. .။